5+1 Promotion. Japanese BBQ Buffet style, Yangon
5+1 Promotion. Japanese BBQ Buffet style, Yangon အသေးစိတ်
ဝေးကွာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရော၊ နီးနေပေမဲ့ လည်း အဆက်သွယ်မလုပ်ဖြစ်ကြတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေကို ဆုံစည်းဖြစ်ကြ ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင် ဆုံစည်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
Manpuku ကနေပြီးတော့ အနည်းဆုံး သူငယ်ချင်း (6) ယောက်ဆုံစည်းပြီးလာရင်တော့ 5+1 ပေးမဲ့ အထူးပရိုမိုးရှင်းကို B&ၤF Weekly Promotions ကဖန်တီးပေးလိုက်ပါပြီနော်…
စားလိုက်ရင် ဆွေမျိုးမေ့သွားစေမယ့် ဂျပန်စတိုင် Manpuku Japanese BBQ Buffet မှာ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ အသား၊ ငါး၊ အသီးရွက်တွေနဲ့ Manpuku မှ Chef များကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ပူပူနွေးနွေး အရံ Menu ပေါင်းမြောက်မြားစွာကို စိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်နိုင်မှာပါ…
ဆိုင်ကိုတော့ သန့်ရှင်းမူကို အဓိကဦးစားပေးထားပြီၤးတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ ဂျပန်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဂျပန်အရသာကို ခံစားစေရမှာပါ..နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် မီးခိုးမွှန်ခြင်း၊အင်္ကျီမှာ အနံ့စွဲကျန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ စားသောက်ပြီး ကြိုက်တဲ့နေရာ ဒိုးလို့ရတာပေါ့…
Buffet ကတော့ Choice ဖို့အတွက် Package ကတော့ (A) and (B) ဆိုပြီး (2) မျိုးရှိမယ်
ဈေးနူန်းကတော့ (A) 14800 Ks နဲ့ (B) 12800 Ks ဈေးနူန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Buffet Style နည်းနည်းကွာမယ်…
Buffet Package (A) မှာဆိုရင်တော့ ပုံမှန် Buffet တွေလို့ အသားများ၊ အရန်ဟင်းပွဲများ Soup များ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး (5800) ကျပ်တန်ဖိုးရှိ ကျောက်အိုးပူ ကိုရီးယားထမင်းသုပ်ကို Free သုံးဆောင်ခွင့်
အရသာမျိုးစုံနဲ့ အသားစုစုပေါင်း (22) မျိုးပါဝင်ပြီး အရသာ(၄) မျိုးဖြင့် Buffet စိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်..
Buffet (B) မှာဆိုရင်တော့ Package (A) မှာပါဝင်တဲ့ Buffet အတိုင်းပါဝင်သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး (အမဲလိုင်းသား၊ အမဲလျှာ၊ ဝက်နံရိုး၊ ဝက်နို့အုံသား ) အသား(4) မျိုးမှအပ စုစုပေါင်းအသား( 19) မျိုးကို အရသာ(4) မျိုးဖြင့် အဝသုံးဆောင့်နိုင်ပါတယ်…
ဒီပဂရိုမိုရှင်းလေးကို ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့ Manpuku Buffet စာမျက်နှာလေးက Use Now ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာလေးကို ပြလိုက်ရုံနဲ့ Promotions ကိုရယူနိုင်ပါပြီ…
Address - No. (26/26B), Aung Zay Ya Road, Kyauk Kone, Yankin Tsp,Yangon
Phone No - 09 8300 426, 09 961 555 966, 09 961 555 977
အသေးစိတ်သိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 09969910115, 099699101258 ကိုရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်..
Promotions Period - 19.Aug .2019 - 19.Nov.2019